Apple dia mampiato ny varotra vaovao rehetra any Torkia rehefa miharatsy ny vola Tiorka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Turkey Breaking News » Apple dia mampiato ny varotra vaovao rehetra any Torkia rehefa miharatsy ny vola Tiorka
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • tompon'andraikitra • fiantsenana • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Lira Tiorka dia nilatsaka tamin'ny firaketana ambany indrindra amin'ny 13.5 lira isaky ny dolara omaly
Ny vidin'ny fivarotana vokatra Apple any Tiorkia dia misy hetra sy sara maromaro, noho izany dia mirona ho lafo kokoa noho ny any Etazonia izy ireo.
Fisondrotana maranitra amin'ny vorontsilozaNy vola nasionaly dia nanery ny orinasa teknolojia amerikana Apple hampiato ny fivarotana ny vokatra rehetra ao aminy amin'ny alàlan'ny tranokalany ofisialy Tiorka.
Apple andrasana ny hampiakatra ny vidiny hanonerana ny fihenan'ny sandan'ny vokatra azony noho ny fianjeran'ny lira Tiorka, izay nilatsaka ho ambany indrindra tamin'ny 13.5 lira isaky ny dolara omaly.
Amin'izao fotoana izao, Apple'Ny fivarotana an-tserasera Tiorka dia tsy mamela ny mpampiasa hampiditra vokatra amin'ny sarety, miaraka amin'ny entana rehetra voamarika hoe 'tsy misy vetivety.'
Ny vidin'ny varotra ny Apple vokatra ao amin'ny vorontsiloza dia misy hetra sy sara maromaro, noho izany dia mihamitombo ny vidiny noho ny any Etazonia. Na izany aza, taorian'ny nidinan'ny lira 15% teo ho eo, dia nivadika ny toe-draharaha, izay nitarika an'i Apple hampiato ny varotra rehetra mandra-pandaminany ny vidiny.
Ny vola Tiorka dia nahavita namerina ny sasany tamin'ireo fatiantoka androany, niakatra ho 12.6 lira isaky ny dolara tamin'ny 09:19 GMT, nanamarika ny tombony 0.8% tamin'ny fanakatonana ny andro teo aloha. Na izany aza, ny fatiantoka amin'ny greenback dia tafakatra 40% tamin'ity taona ity, ary nihena 19% tao anatin'ny folo andro fotsiny.